एसि'ड छ्या'प्ने एक भारती'यसहित दुई जना प'क्राउ
अपराध एसि'ड छ्या'प्ने एक भारती'यसहित दुई जना प'क्राउ
एसि’ड छ्या’प्ने एक भारती’यसहित दुई जना प’क्राउ
Nepal Online Patrika: काठमाडौंको सितापाइलामा हिजो साँझ युवतीलाई तेजा’ब छ्या’पेर भाग्ने एक भारतीयसहित दुई जनालाई प्रहरीले राति नै पक्रा’उ गरेको छ। पक्रा’उ पर्नेमा भारत घर भएका मुन्ना मोहम्मद र रौतहटका मोहम्मद आलम छन्।
काठमाडौं प्रहरी परिसर र महानगरीय अप’राध अनुसन्धान महाशाखाको संयुक्त टोलीले उनीहरुलाई बिहीबार राति ११ बजे डल्लुबाट पक्रा’उ गरेको हो। उनीहरुले नागार्जुन नगरपालिका-४, सिर्जनशील टोलमा ओखलढुङ्गा घर भएकी २२ वर्षीय युवतीलाई एसि’ड छ्या’पेर भागेका थिए।
युवतीलाई बाथरुम सफा गर्ने ए’सिड प्रहार गरेको प्रारम्भिक बयान दिएको प्रहरीले जनाएको छ। बिहीबार साँझ उनी दही किन्न डेराबाट निस्किएकी थिइन्।
सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको हुलियाको आधारमा प्रहरीले उनीहरुलई पक्रा’उ गरेको हो। दुवै डल्लुमा डेरा गरी बस्थे। एसि’ड प्रहार भएको घटना सार्वजनिक भएलगत्तै प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकाका सबै नाका बन्द गरी हुलिया परिपत्र गरेको थियो।
मोहम्मद र ती युवतीको एक क्यासिनोमा काम गर्दा चिनजान भएको थियो। मोहम्मदले ती युवती मन पराएको तर, युवतीले अर्कै केटा मन पराएको थाहा पाएपछि एसि’ड हानेको प्रहरीलाई बताएका छन्।
मोहम्मदको आग्रहअनुसार मुन्नाले युवतीमाथि रक्सी’को बोतलमा राखेर ए’सिड छ्यापेका थिए। मोहम्मदलाई युवतीले चिन्ने भएकाले उनी अलि परै बसेका थिए। एसि’ड छ्यापे’पछि मोटरसाइकलमा दुवै डल्लुतर्फ भागेका थिए।
तिहार लगत्तै काठमाडाैंमा फेरि कडा निषेधाज्ञा !
कविता - November 14, 2020 0
उपत्यका नगरपालिका फोरमले काठमाडौं उपत्यकामा पुनः कडा निषेधाज्ञा गर्न आग्रह गरेको छ ।
तिहारपछि कडा लकडाउन गर्नेे तयारी
कविता - November 12, 2020 0
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) नियन्त्रणका लागि चाडपर्वपछि पुनः लकडाउनको प्रस्ताव आएको छ।
जाग्यो ओलि सरकार बल्ल दियो देशैभरिका तीन करोड जनतालाइ यस्तो खुसिको खबर !
कविता - November 11, 2020 0
Email: [email protected]alonlinepatrika.com